"ရပ်၊ လက်နှစ်ဖက်လုံး ခေါင်းပေါ်တင်၊ ရှေ့မတိုးနဲ့ ပစ်ထည့်လိုက်မယ်"
"စစ်တပ်ဆိုတာ ပစ်ရင်မှန်အောင်ပစ်တယ်.. မိုးပေါ်ထောင်ပြီး ခြောက်တာမပါဘူး .."
"အား..ကျွတ်ကျွတ်.. နာလိုက်တာ. ကိုအောင်မြတ်ရယ်.. ဆေးရုံကို.. မြန်မြန်ပို့ပါ.. အို..အမေရဲ့.. နာလိုက်တာ..ကျွတ်ကျွတ်.."
"ကလေးမမွေးနိုင်လို့.. ဆေးရုံပို့မလို့ပါဗျာ.. ဒီမိန်းမကလည်း.. မိုးလင်းတဲ့အထိ အောင့်ထားပါလို့ တဖွဖွပြောနေတဲ့ကြား ထဲကနေ မအောင့်နိုင်လို့ခုလိုဖြစ်ရတာ..”
"သွား၊ သွားလို့ရပြီ၊ ပါးစပ်က အော်သွား"
"အမယ်လေး..ကိုအောင်မြတ်ရဲ့.. နာလိုက်တာတော့.. ဆေးရုံကိုမြန်မြန်ပို့ပါတော့.. အမယ်လေး ..ကျွတ်..ကျွတ်..ကျွတ်..”
(က - ၁)
"ဆရာ.. ဘီဘီစီက မနက်ဖန်ရှစ်လေးလုံးနေ့မှာဒီမိုကရေစီသပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲဖို့ တောက်လျှောက် အခါပေးနေတယ်.. တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလားဆရာ.."
"မင်းကရော.. ဒီမိုကရေစီသပိတ်ကြီးပေါ်ပေါက်စေချင်သလား.. ဘာဖြစ်လို့ပေါ်ပေါက်စေချင်ရတာ လဲ.. မင်းအမြင်လေးပေါ့.."
"ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင်တော့.. ဒီမိုကရေစီသပိတ်ကြီး တကယ်ဖြစ်စေချင်တယ်ဗျာ.. အဓိကကတော့ မ.ဆ.လအစိုးရ ကိုမကြိုက်ဘူးဗျာ.. သူတို့လုပ်ချင်တာကို စွတ်လုပ်တယ်.. ငွေစက္ကူတွေကို တရားမဝင်ကြေညာလိုက်တာ လူတွေတော်တော် များများ ထိကုန်တယ်၊ ကျွန်တော်ဆိုကလေးတွေရှင်ပြုဖို့စုထားတဲ့ ခုနစ်ဆယ့်ငါးကျပ်တန်တွေ တစ်ထပ်လိုက် ကြီးထိသွား တယ်.. မိန်းမဆိုရူးမလိုတောင် ဖြစ်သွားတာမနည်းကို ဖျောင်းဖျယူရတယ်..”
"အေးပေါ့ကွာ.. မင်းလိုပဲပေါ့..ငါ့တပည့်ရာ.. ပြည်သူတွေတဦးချင်းစီမှာ မဆလအစိုးရကို မကျေနပ်ချက်တွေက လူတိုင်း ကိုယ်စီရှိကြတယ်.. တပါတီစနစ်မှာ အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရ ညံ့ဖျင်းရင် ပြည်သူတွေဟာ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရတာပဲ..တို့နိုင်ငံ ဟာ အရင်တုန်းက အရှေ့တောင်အာရှမှာ ထိပ်ဆုံးကရှိခဲ့တာပါ့၊ သူတို့နှိပ်စက်လိုက်တာ.ကမ္ဘာမှာဖွံ့ဖြိုးမှု နောက် အကျဆုံး နိုင်ငံ (LDC) စာရင်းဝင်သွားတော့တာပဲ.. အကြွင်းမဲ့အာဏာဟာ အကြွင်းမဲ့ပျက်စီးစေတာပေါ့ကွာ..သူတို့က ဒီမိုကရေစီကိုမောင်ပိုင်သိမ်းထားတဲ့ အာဏာရူးတွေပေါ့ကွာ..”
"၆၂ ခုနှစ်မတ်လမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းဟာ.. ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဆီကနေအာဏာသိမ်းတယ်ကွာ.. ဇူလိုင်လမှာ ကျောင်းသား တွေ ကိုသတ်တယ်. ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက် အဦကြီးကို ဒိုင်းနမိုင်းနဲ့ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးတယ်.. နောက်တော့ ၇၄မှာအလုပ်သမားအရေးအခင်း၊ ဦးသန့်ဈာပနအရေးအခင်း၊ ၇၅မှာ ကျောင်းသားအရေးအခင်း၊ ၇၆မှာ မှိုင်းရာပြည့် အရေးအခင်း၊ ရခိုင်ဆန်ပြဿနာ၊ ၈၈ဇွန်လကျောင်းသားအရေးအခင်းတွေဆက်တိုက်ပေါ်တာပေါ့.. ပေါ်တိုင်းလည်း ပြည်သူတွေရဲ့အသက်သွေးတွေ မြေခခဲ့ရတာချည်းပဲ.. ငွေစက္ကူ တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ၆၄.. ၈၅.. ၈၇.. သုံးကြိမ်တောင်မှ.. တရားမဝင်ကျေညာခဲ့တာ. ဒီပြည်သူတွေမှဒုက္ခမရောက်ရင် ဘယ်ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်မလဲကွာ.. ဒီအကြောင်း တရားတွေဟာ လောင်စာတွေပေါ့ကွာ. .ပေါက်ကွဲဖို့စနက်တံပဲလိုတော့တာ..စနက်တံက အာရ်အိုင်တီကျောင်းသားဖုန်းမော်ကျဆုံးမှုပဲ.. စနက်တံကတော့မီးရှို့ပြီးပြီ.. လောင်ဖို့ပဲလိုတော့တာ… ကြည့်ထား၊ မနက်ဖန် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးမှာ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူ ကျောင်းသား အားလုံးပါဝင်လာမှာ စိတ်ချ..”
"ကိုအောင်မြတ်.. လက်ဖက်ရည်သောက်ပြီးရင်.. ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့.. ဈေးချိုဘက် ဘုရားကြီးဘက် အခြေအနေသွား ကြည့်ကြရအောင်.. ဘယ့်နှယ်လဲ..”
"အိုကေ.သွားကြမယ်လေ.. အခြေအနေကြည့်ပြီး.. လှုပ်ရှားကြတာပေါ့.."
"တို့..ဒီကနေ.. အေလမ်းအတိုင်း မြတောင်တိုက်ဘက်ကိုသွားမယ်.. အခြေအနေကြည့်ပြီးမှ ဘုရားကြီးဘက် ဒါမှမဟုတ် ဈေးချိုဖက်သွားကြတာပေါ့.. "
"…….ဆိုရှယ်လစ်..ရှစ်ဆယ်လို.. ဘယ်တော့မှကျပ်မပြည့်တဲ့ဦးနှောက်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာ.. တိုင်းပြည်မမွဲ ဘဲ ဘယ်နေတော့မလဲ.. ဒါကြောင့်လည်း. တချိန်က အရှေ့တောင်အာရှမှာ ထိပ်ဆုံးကချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့တဲ့ ကျုပ်တို့နိုင်ငံဟာ ၈၇ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်အကျဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် အကြေညာခံလိုက်ရတယ်ဗျာ..ဘယ်လောက် ရင်နာဖို့ကောင်း သလဲဗျာ.. "
"ဖျောင်း.. ဖျောင်း.. ဖျောင်း.."
"တရားဟောတဲ့လူငယ်လေးက. ကိုလှမြင့်တဲ့.. တံခွန်တိုင် တောင်မြင့်ကတဲ့.. လေးစားဖို့ကောင်း လိုက်တာ.. သူ့သတ္တိကို ချီးကျူးတယ်ဗျာ..”
"ကျွန်တော်တို့ ဈေးချိုဘက်ကို တရားသွားဟောကြမယ်..”
"တစ်ပါတီအာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေး" "ဒို့အရေး ဒို့အရေး”
"ပါတီစုံစနစ်ရရှိရေး" "ဒို့အရေး ဒို့အရေး”
"ဒီမိုကရေစီရရှိရေး" "ဒို့အရေး ဒို့အရေး”
"သပိတ်… သပိတ်" "မှောက်.. မှောက်”
"အောင်သန်း.. အဲဒီအပြာရောင်အဖွဲ့တွေက. စိန်အောင် စောင်စက်ကထင်တယ်… ဟိုနောက်က အဖွဲ့က ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပဲ….”
"ဆရာဝန်တွေနောက်ကအဖွဲ့က ပုဏ္ဏားအဖွဲ့ပါလား..ဗောဓိကုန်းကအဖွဲ့ပေါ့. အားရတယ်ဗျာ..”
"အော.. အိမ်ရှင်မများအဖွဲ့ကလည်း ဓားတွေ၊ ယောက်မတွေ၊ ငရုတ်ကျည်ပွေ့တွေ၊ ဆန်ကောတွေနဲ့ပါလား.. အေးပေါ့ဗျာ.. သူတို့ကဆင်းရဲမှုဒဏ်ကိုထိပ်ဆုံးကနေ ခါးစည်းခံ နေရသူတွေဆိုတော့ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့”
"ဦးပဉ္စင်းရာ.. ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေက လေးစားဖို့ကောင်းလိုက်တာ.. အခုတရားပွဲမှာလည်း. လူအပြည့်.. တနေ့က မန်းရာပြည့်ကွင်းမှာလည်း..လူတွေသိန်းချီ လောက် တယ်.. တကယ့် အံ့ဘနန်းပါပဲ.. ဘုရား.."
"ဒါယကာကလည်း.. ‘အုတ်ကျစ်ကျော်အေး၊ မန္တလေး’တဲ့.. မန္တလေးမြို့တည် နှစ်တစ်ရာပြည့်ပွဲတော်ကြီးကို မန္တလေးတောင်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ သည်ကွင်းပြင်ကျယ် ကြီးမှာ မင်္ဂလာရှိရှိ စည်စည်ကားကား ကျင်းပခဲ့ဖူးတာပေါ့.. အထက်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သပိတ်တပ်ပေါင်းစုညီလာခံကြီးကိုလည်း ဒီမန်းရာပြည့်ကွင်းကြီးမှာ စည်စည်ကားကား သိုက်သိုက်မြိုက်မြိုက်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်.. ကြက်ပျံမကျ စည်ကားတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့.. ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးအတွက်တော့ မင်္ဂလာပဲပေါ့ ဒါယကာရာ.. တအိမ်တယောက် မလာမနေရ.. ဘယ်သူကမှဆင့်ခေါ်နေစရာမလိုဘူ.. ကိုယ့်အသိတရားနဲ့ကိုယ်.. ကိုယ့်စည်းကမ်းနှင့်ကိုယ်လာကြတာ.. အဖိနှိပ်ခံဘ၀က ဘယ်လောက်များ လွတ်မြောက်ချင်ကြ သလဲ.. သိသာတယ်..”
"တင်ပါ့ ဘုရား.. ဒါကြာင့်လည်း.. ချွေးစို့နေတဲ့သူတို့မျက်နှာတွေဟာ. ပီတိတွေဖြာနေတာပေါ့ ဘုရား..မမောနိုင်မပန်းနိုင်ဘဲ..”
"သူတို့တတွေ မပျော်ဘဲဘယ်နေလိမ့်မလဲ..ဆန္ဒပြပြီးလေးရက်လောက်နဲ့. သမ္မတတယောက်ကို ဖြုတ်ချနိုင်သလို တပါတီအာဏာရှင်စံနစ်ကိုလည်း. ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က. ဖြုတ် ချနိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား. ဒါယကာရဲ့...”
"ကဲ.. ဒါယကာ.. ဘာတွေပါလဲပြစမ်း..”
"ဟာ…မကိုင်နဲ့.. မကိုင်နဲ့.. အတင်းမလုပ်နဲ့ ကွဲကုန်လိမ့်မယ်.."
"တပည့်တော်က.. ဆေးကုပါတယ်ဘုရား.. အခုဟာက အားဆေးပုလင်းတွေပါဘုရား.. အရမ်းကိုင်လိုက်ရင် ကွဲသွားမှာစိုးလို့.. ကွဲတတ်တယ်လို့ပြောတာပါဘုရား.. တနေ့ခင်း လုံးဆန္ဒပြကြရတာ.. တပည့်တော့်အားဆေးလေးတလုံးထိုးလိုက်ရင်.. နောက်နေ့အတွက် လယ်ဒီဖြစ်သွားရော.. တပည့်တော်က.. အပ်ပုန်းဆိုတော့.. အရှင်ဘုရားတို့အဖွဲ့ကို ကြောက် လို့ပါဘုရား..”
"ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဂရိဘာသာစကားဗျ.. ဒီမော့စ်ဆိုတာ ပြည်သူလူထု.. ခရာတော့စ်ဆိုတာအုပ်ချုပ်ရေးပေါ့.. တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပြည်သူ့အာဏာကိုဆိုလိုတာ ပဲ.. ပြည်သူ့ကိုယ်စား ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့အစိုးရကို အာဏာလွှဲအပ်တာပေါ့..”
"ကိုယ်ကတော့.. ဒီကဗျာလေးကို သိပ်သဘောကျတာပဲ.. ကိုကိုးကျွန်းအရေးတော်ပံမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်လေးမောင်ရဲ့ကဗျာ.. ကိုယ်ရွတ်ပြမယ်..နားထောင်ကြည့်..
"မြို့ဟောင်းဘူတာမှာ စစ်ကားတွေရောက်နေတယ်.. စစ်ရထားထွက်မဲ့သဘောရှိတယ်.. ရထားထွက်ဖြစ်ရင် ဘူတာမှာရုံပိုင်မရှိလည်း ကိစ္စမရှိဘူး.. သူတို့မှာ ဆက်သွယ်ရေး စက်တွေပါမှာ.. ရထားလမ်းတွေပျက်နေလည်း မှုမှာမဟုတ်ဘူး.. စစ်အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ပြင်မှာ.. သူတို့အတွက်အရေးကြီးတာက ရထားမောင်းမဲ့သူ.. အဲဒီတော့. မရမကရှာမှာသေချာ တယ်.. တို့အဖွဲ့တွေက. ဒါကို သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်.. ကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရာကို လက်တို့ထား.."
"ကိုအောင်မြတ်ရ.. သူတို့မှာ စက်ခေါင်းမောင်းစစ်သည်တွေရှိတယ်မဟုတ်လား..”
"အော်.. ကိုမျိုးတင့်ရယ်.. သူတို့က ၇၆ခုနှစ်မှာ အင်းစိန်မီးရထားဗဟိုသင်တန်းကျောင်းက ဆင်းသွားတာ.. ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီလေ.. လေ့ကျင့်မှုမှမရှိတာ.. မေ့လောက်ရောပေါ့ .. နောက်ပြီး သူတို့ လေ့ကျင့်တုန်းက ပြင်သစ်စက်ခေါင်းအဟောင်းတွေနဲ့.. အခုမန္တလေးမှာရှိတာက ဂျာမန်စက်ခေါင်းအသစ်တွေ.. သူတို့ဘယ်လိုမှမောင်းတတ်မှာမဟုတ်ဘူး.. အဲဒီ တော့.. မောင်းမဲ့သူ သေချာပေါက်လိုမှာ..”
"ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ မောင်အောင်မြတ်ရယ်.. ခြေထောက်က ဘာဖြစ်သွားတာလဲ..”
"ဘာဖြစ်ရမလဲ အဒေါ်ရယ်.. အဒေါ်က ပြေး..ပြေး..ဆိုလို့..အားလုံးပြေးကုန်ကြတာ.. သံလမ်းပေါ် တောင်ရောက်ကုန်ပြီ..ကျွန်တော်သာ..ခုန်ချလိုက်တာ..ခြေထောက်ခိုက် မိလို့ ကျန်နေခဲ့တာ.."
"ဟား. ဟား..ဟား.. ဖြစ်မှဖြစ်ရပလေ..မောင်အောင်မြတ်ရယ်.. ငါက မင်းတို့စားဖို့ ငါ့မြေးကိုအကြော်ဝယ်ခိုင်းလိုက်တာ.. ဟိုဘက်အိမ်က အဖေါ်ကိုမီအောင် အပြေးလိုက်ခိုင်း လိုက်တာ.. ဖြစ်မှဖြစ်ရ လေကွယ်."
"ရပ်.. လက်မြှောက်.. ဘယ်သူလဲ.. ဘယ်သွားမလို့လဲ"
"ဂျ..ဂျနော်.. ဒီ..ရားဂွက်မာ.. နေးဒယ်နော်.. ဗြုတ်သွားဒဲ့ မီးရဒါး ဇက်ဗိုလ်ဘာ.."
"အေး.. ရထားစက်ဗိုလ်ဆိုရင်.. ပြုတ်တာတွေ.. မပြုတ်တာတွေမလိုချင်ဘူး.. ရှေ့ကသွား.. စက်ခေါင်းပေါ်တက်.."
"ရှင့်ဇနီး သားလေးမွေးတယ်.. မအေရော..ကလေးရော.. ကျန်းမာတယ်..”
"ငါ့အတွက် သားယောင်္ကျားရတာမင်္ဂလာပဲ.. ငါတို့မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို သူတို့ကိုဆက်ပြီးလက်လွှဲ ပေးရမယ်. ငါ့သားဟာ ဒီမိုကရေစီအတွက် အာဇာနည် ဖြစ်စေရမယ်.. သူ့ကို ‘ ဇာနည်အောင် ‘လို့နာမည်ပေးရမယ်.. သူတို့ လက်ထက်မှာ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ ‘အောင်’ ရမယ်…ဟုတ်တယ်.. သူ့နာမည်..ဇာနည်အောင်.. ဇာနည်အောင်.. ဇာနည်အောင်..”
"မနက်ဖန်နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ အလုပ်ပြန်ဝင်ရတော့မှာပဲ.. မဝင်ရင်.. ဆွဲမှာသေချာတယ်.."
"ကိုယ်ကမှ အလုပ်ကို မစွန့်လွှတ်နိုင်သေးတာ.." "မီးစင်ကြည့် ကကြရမှာပဲ.."
"မနက်ဖန်.. ရထားကသေချာပေါက်ပြန်ဆွဲမှာ.." "ဘယ်သူ. စ,မောင်းသင့်သလဲ.."
"ရထားစပြေးပြီဆိုပါစို့.. ရုံပိုင်တွေ၊ဘူတာဝန်ထမ်းတွေမစုံရင်.. ဘယ်သူက အလံချိုးပေးမလဲ.. ဆက်သွယ်ရေးစက် တွေပျက်နေရင် တဘူတာနဲ့တဘူတာ ဘယ်လိုဆက်သွယ် မလဲ.. အဆက်အသွယ်မရရင် ရထားချင်းတိုက်နိုင်တယ်.. နောက်ပြီး.. သံလမ်းအလုပ်သမားတွေ မစုံရင်. ရထားလမ်းတွေကို ဘယ်သူကစစ်ပေးမလဲ.. သံလမ်းဆက်တွေဖြုတ်ထားရင် ရထားမှောက်မှာ.."
"ကချင်ပြည်နယ်ရောက်ရင် လုံခြုံရေးကဘယ်လိုလဲ.. ချောင်းပစ်ရင်ပစ်.. မပစ်ရင်.. မိုင်းခွဲမှာ သေချာတယ်.. ကေအိုင်အေက အရင်တည်းက လက်စလက်နရှိတာ..”
"မောင်းမဲ့သူမရှိရင်..အားလုံးကိုကုတ်မှာ.. စ,မောင်းတဲ့သူက နည်းနည်းတော့ စွန့်စားရမှာပဲ.. အားလုံးကိုယ်စား. အနစ်နာခံရမှာပဲလေ.."
"အေးပါဗျာ.. ကျွန်တော် ဖိုမင်ကြီးကိုတင်ပြပြီး.. အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်.. စီစဉ်ပါ့မယ်.. အားလုံးစိတ်အေးအေးထားပါ..လုပ်ငန်းခွင်သာပြန်ဝင်ကြပါ.. ထမီကျွတ်လို့လွှတ် လိုက်တယ်လို့ပဲ အောက်မေ့ကြပါ.”
"ကိုအောင်မြတ် မောင်းသွားရှာပါလား..""ဒါမှ.. ဇာနည်အောင်တို့အဖေကွ…”
Min Agga (Sin Tae Wa) Short Stories